Qalabka Mashiinka Dayactirka Qalabka Isboortiga - GO! SPECTRUM SCHOOL (DUAAL // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
spectrum School > koorsooyinka our > dual Learning > Qalabka Mechanics-ga Daryeelka
ah Tababarka BSO Tababarka Gawaarida Dayactirka Dual waxaad baraneysaa inaad si madaxbannaan uga shaqeyso gawaarida, gawaarida, baabuurta, iwm. Waxaad baraneysaa inaad sameyso baaritaanka saxda ah ee cilladaha, dayactirida gawaarida iyo dayactirka sida waafaqsan shuruucda farshaxanka.
Waddada caadiga ah ee tababarka 'Qalabka Mechanics Vehicle Dual ' wuxuu ka kooban yahay kooxaha soo socda:
Dayactir marmar ah iyo adeeg dhakhso ah
U diyaarinta baabuurka kormeerka farsamada iyo gudbinta
Macluumaad faahfaahsan oo kusaabsan waddadan istaandarka ah (364 kb, .pdf)
Waxaad socotaa Maalmaha 2 ee dugsiga maadooyinka guud, maaddooyinka falsafadaada, isboortiga iyo aqoonta cilmiga ah ee wax ku oolka ah ee ka tirsan barnaamijka shahaadadaada. Waxaad shaqayn doontaa maalmaha kale ee 3. Waxaad la socotaa dhaqdhaqaaqaaga ku jira diiwaankaaga. Macallinkaaga macallinimada ayaa kula socodsiin doona horumarkaaga si wadajir ah, adigoo la tashanaya macaamilka goobta shaqada.
Ma jeceshahay furaha baabuurta, mootooyinka iyo baaskiiladaha? Ma jeceshahay gawaarida quruxda badan? Miyaad dooneysaa inaad wax ka barato dhaqanka oo aadan u jilicsanayn shaqada jireed? Ma jeclaan lahayd inaad barato inaad ku biirto shaqada?
Si aad u bilowdo Qalabka Mechanics-ga Daryeelka waa inaad noqotaa qof haysta shahaadada 2e ee waxbarashada dugsiga sare, ama go'aanka wanaagsan ee golaha fasalka.
Ka dib tababarka Dhaqdhaqaaqa Mashiinka Dayactirka waad heleysaa shahaadada waxbarashada dugsiga sare. Hase yeeshee, waad haysataa ma ahan diblooma waxbarasho sare. Sidaas awgeed waxaa lagula talinayaa inaad haysato mid 7e sannadka khaaska ah in la raaco. Dugsigeena waxaad ku takhasusi kartaa aagga Daraasada Awooda Awood-koronto. Ka dib markaad hesho Dibloomada waxbarashada dugsiga sare Ma waxaad tahay koronto yaqaan buuxa oo waad ka bilaabi kartaa goobta shaqada ama xitaa bilaabi kartaa ganacsigaaga.
Haatan waxaanu kobcinaynaa koorsada Daryeelka Daryeelka Daryeelka Cariga ah. Waxaad geli kartaa sanadka 5e. Laga soo bilaabo dugsiga 2019-2020 bogsan doonaan sanadka 6e ah ka dib markii taas oo aad u soo guurto karaa si sano 7e takhasuska ah.
Kala tasho halkan miisaska casharrada ee tababarka BSO Tababbarka Qalabka Dayactirka Mechanics:
Nidaamkani wuxuu bixiyaa lacag. 7 oo ku saabsan kuwa loo shaqeeyayaasha 10 waxay shaqaalaysiin doonaan qof si dhakhso ah haddii ay ku yeesheen qaab waxbarasho ee goobta shaqada inta lagu jiro tababarkoodasida laga soo xigtay cilmi baarista UNIZO. "Barashada goobta shaqadu waa inay noqotaa arrin kooras ah dhammaan koorsooyinka, oo si toos ah ugu xirma baahida shirkadaha naftooda", sida laga soo xigtay madaxa shirkadda UNIZO Karel Van Eetvelt.